You are here: Home somal Qofka banii? aadanka ahi waxa uu ka koobanyahay Jidh iyo ruux(naf). Jidhka waxa hoggaamisa nafta , waayo naftu waxa ay ka timid samada, jidhkuna waxa uu ka soo jeedaa dhulka
Jidhku waxa uu quutaa waxa dhulka ka soo baxa, naftuna waxa ay ku nooshahay waxa samada ka yimaadda. Sidaa daraadeed naftu haddii ay weydo degganaansho iyo qabow, hadday doonto yaanay waxba haysane, waxa ay u xadhko xidhanaysaa sidii ay
arrintaa u gaadhi lahayd, jidhkuna waa layaabe, kama joojin karo halaagga ay ku sii waddo.
Tahriibka maalmahan ama bilahan aad u soo kordhayay ee dhallinyartii waddanku ku beegsanayaan dhulal kuwa hore dhimashadoooda laga soo sheegay, markaan muddo ka fikirayay sababta, waxa aan ku soo koobay dhawrkan qodob iyada oo laga yaabo in ay kuwa kale oo iga qarsoonina jiraan.
1. Higsi la?aan
Dhallinyartani inta badan ma laha higsi horumarineed oo yool u ah, meelna ugu qoran ama ugu yaraan maskaxda ugu jira ( way kala xoog badan yihiin). Qofka sidaas ahina waxa uu aroor walba la soo toosayaa niyad xumo iyo rajo la?aan, taas oo marka danbe keenaysa in uu nolosha ka qanco.
2. Ku dayasho iyo lab la kac
Qaar badani iyaga oo shaqo ku filan haysta, jaamacad dhigta, reerkoodana laga yaabo in uu wax ku taro, ayuu dhaqaaqaa, waayo waxa uu iska xejin kari la?yahay wararka ka soo gaadhaya kuwo hore u tagay, sida ay ku tageenna Ilaahay uuni ogyahay, oo badda qarkeeda kale kala soo hadlay, waxa ay immika ku jiraanna aan la ogayn, sababta oo ah waxa jiidanaya dareen dalxiis iyo dhul kale soo arag. Dhallinyarta qaarbaan xataa waddanka wada arag, taas oo keentay waayo aragnimo la?aan dhul-mareennimo.
3. Akhris la?aan
wax akhriska oo bulshadeennu marka horeba ku xuntahay ayaa dhallinyartana qayb weyn kaga jira sababaha ay u tahriibayaan. Wax akhrisku waxa uu horseedaa maskax ballaadhata iyo waaqicinnimo, qofkana waxa uu ka dhigaa meelo badan oo aanu tagin sidii qof tagay. Waxa uu keenaa in qofku u fikiro siyaabo kala duwan, meelo kala duwanna ka fikiro, khatarta iyo halisahana qiimayn karo.
Maskaxda ayaa soo buuxsanta, waayeelna noqota, waxyaabo badan oo dadku wax weyn u haystaanna isaga waa ay la yaraadaan.
4. Rajo xumo
Inta badan dhallinyartani waxa ay ka rajo dhigeen, in ay waddanka wax ka noqon karaan, haddii aanu suldaan ama caaqil dabada ka wadin, oo markaana waliba halgan joogto ahi u dheeryahay sidii weerarro meelo kala duwan kaga immanaya uu iskaga difaaci lahaa, si uu u ilaashado mansab la siiyay ama shaqo.
Madaxda dalka iyo indheergaratadu maaha in ay dhallinyarta ka aamusaan, wax kale haddii ay waaayeen ma rajo galin bay samayn kari waayeen. Dadka waxa ugu bakhaylsan qofka inuu dadka rajo galiyo kala bakhayla. Dhallinyarta waxa loo abaabuli karaa mashruucyo horumarineed oo aan kharash badan ku bixin, waddankana wax tar u ah sida in ay ka qayb qaataan dhismayaal cusub.
C/raxmaan C/laahi Warsame